सम्भव होला कपडाबाटै मोबाइल चार्ज ? | गृहपृष्ठ
Home प्रविधि सम्भव होला कपडाबाटै मोबाइल चार्ज ?
काठमाडौं (अस) । आफूले लगाएको कपडाले नै मोबाइल चार्ज गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउने तयारीमा वैज्ञानिकहरू लागिपरेका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकका अनुसार शरीरमा लगाउने कपडामा राखिने सोलार प्यानलका माध्यमबाट स्मार्टफोन मात्र होइन, जीपीएस तथा ट्याब्लेट समेत चार्ज गर्न सकिन्छ ।
सोलार ड्रेसेज फोटो भोल्टाइक सेल भनिने यो प्रविधिले यस्तो उपकरणको रूपमा काम गर्ने र ग्याजेटलाई सजिलैसँग चार्ज गर्न सकिने बताइएको छ । सूर्यको किरण जब फोटोभोल्टाइक ब्याट्रीमा पर्छ, तब त्यसबाट प्राप्त ऊर्जालाई यो प्रविधिले सेमिकन्डक्टरसम्म पुर्‍याउने काम गर्छ । सेमिकन्डक्टरमा रहेका इलेक्ट्रोनको सम्पर्कमा आएसँगै उक्त सौर्य ऊर्जा विद्युत्मा परिणत हुन्छ ।
अमेरिकाको लस एन्जल्समा रहेको सिल्भर लाइनिङ नामक कम्पनीले केही समयपहिले नै सौर्य ब्याट्री प्रविधिमा आधारित पहिरन बजारमा ल्याइसकेको छ । निकै कलात्मक ढंगले प्रयोग गरिएको यो प्रविधिमा कपडामा आईफोन लगायत स्मार्टफोन चार्ज गर्ने सुविधासमेत उपलब्ध छ । कम्पनीका अनुसार यी कपडा त्यस्ता मानिसका लागि उपयोगी छन्, जो कुनै न कुनै कामका लागि घर वा कार्यालयबाट टाढा रहन्छन् । यसका केही बेफाइदा पनि छन् । सोलार कपडामा विद्युत् प्रवाह गर्न लामो समयसम्म घाममा बस्नुपर्छ । लामो समय चर्को घाममा बस्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् ।
१ सय तिरेर मोबाइल चार्ज गर्दै डोल्पाली